आज सूर्य ग्रहण : नेपालबाट नदेखिने भएकाले सूतक बार्नु नपर्ने ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
आज सूर्य ग्रहण : नेपालबाट नदेखिने भएकाले सूतक बार्नु नपर्ने !
झण्डै चार घण्टा आठ मिनेट लाग्ने सूर्यग्रहण नेपालबाट भने नदेखिने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताए । उनका अनुसार यो ग्रहण नेपालमा रात परेपछि मात्रै लाग्नेछ । यसको प्रभाव नेपालमा नरहने भएकाले सूतक बार्न नपर्ने उनले बताए ।